သင်ခြေရာခံသင့်သည့်အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးမက်ထရစ်သစ်နှစ်မျိုး Martech Zone
သောကြာနေ့, ဧပြီ 10, 2015 သောကြာနေ့, ဧပြီ 10, 2015 ဂျင်မ်စတာရန်
ကုန်သွယ်ခြင်း (မတ်လ ၁၉ ရက်နံနက် ၁၀း၁၈ မိနစ်၊ ပစိဖိတ်နေ့အလင်းရောင်) မှ -
လက်လီစားသုံးသူများသို့ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသောမည်သည့်အလေ့အကျင့်မဆို။ လက်လီရောင်းဝယ်ရေးအဆင့်တွင်ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်ခြင်းသည်ရောင်းရန်ရရှိနိုင်သည့်အမျိုးမျိုးသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏ပြသမှုကိုစိတ် ၀ င်စားမှုရှိစေရန်လှုံ့ဆော်ပေးပြီးဖောက်သည်များက ၀ ယ်ယူရန်ဆွဲဆောင်သည်။
ကုန်သွယ်ခြင်းနှင့်အချက်အလက်များ၏ပထမ (အပေါခရစ်ဖယ်) ပုံပြင်သည်တစ်ခါသုံးအနှီးနှင့်ဘီယာတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သင်္ချာကပြသထားသောအနှီးများကို ၀ ယ်ယူသူများသည်ကြီးကျယ်သော box store သို့သွားရန်ထက်စီစဉ်ထားသောခရီးများ၌မဟုတ်ဘဲစတိုးဆိုင်များတွင်တစ်ခါသုံးအနှီးများကို ၀ ယ်သူများကလည်းဘီယာခြောက်ဗူးကိုကောက်ယူလိုက်သည်ကိုပြသည်။
ကုန်သည်များ၏အခန်းကဏ္thoseမှာထိုပစ္စည်းနှစ်ခုကိုအတူတကွသိုလှောင်ခြင်းကဘီယာရောင်းချမှုကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်ခြင်းရှိ၊ မရှိဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ မတူညီသောပထဝီအနေအထားအရ၊ မတူကွဲပြားသည့်လူမှုစီးပွားရေးဒေသများတွင် - ကွဲပြားခြားနားသောစျေးနှုန်းအချက်များဖြင့် data-drive ကုန်သည်များသည်နှစ် ဦး စလုံးကိုစမ်းသပ်လိမ့်မည်။
7-Eleven စတိုးဆိုင်များသည်သူတို့၏အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသောလက်လီအရောင်းနေရာများကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်သူတို့၏စင်ပေါ်ရှိကုန်ပစ္စည်းများကိုမည်သို့ပြောင်းလဲခဲ့ပုံအကြောင်းဂျပန်မှထွက်လာသည့်အခါကုန်ပစ္စည်းအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းသည်၎င်း၏အချက်အလက်အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
စတိုးဆိုင်ကြီးများနှင့်အလုပ်လုပ်သောအခါအချို့သောထုတ်လုပ်သူများသည်သြဇာရှိကြသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းများ၊ ရေကြောင်းပို့ဆောင်စရိတ်နည်းခြင်း၊ အထူးထုပ်ပိုးခြင်းစသည်တို့အတွက်လက်လီရောင်းချမှုကွင်းဆက်သည်အကောင်းဆုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုအထူးကမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော်စျေး ၀ ယ်သူအပေါ် မူတည်၍ စတိုးဆိုင်ပြသမှုများသည်မမြင်ရသောသို့မဟုတ်တက်ကြွစွာဖြစ်ပေါ်နေသောအခါမည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ခြင်းမှကြိုဆိုပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည် Amazon, BestBuy သို့မဟုတ် Costco မှတစ်ဆင့်ရောင်းလျှင်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများသည်ပင်မစာမျက်နှာ၊ သတ်မှတ်ထားသောအမျိုးအစားတစ်ခုသို့မဟုတ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရှာဖွေမှုများ၌ဤအရာများကိုကြိုတင်ညှိနှိုင်း။ ကြိုတင်ညှိနှိုင်း။ မရကောင်းသည်ဖြစ်စေသင်မသိပါ။
ဒီနေရာမှာအသစ်သောမက်ထရစ် ရှာဖွေနိုင်မှု နှင့် စျေးဝယ် အထဲဝင်ပါ။
ကတီထွင်ခဲ့သည် အကြောင်းအရာ Analytics:
ရှာဖွေနိုင်မှု စားသုံးသူတစ် ဦး ၏အွန်လိုင်းကုန်ပစ္စည်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်စွမ်းကိုတိုင်းတာသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ အရွယ်အစား၊ ထုပ်ပိုးမှု၊ စျေးနှုန်းစသည်တို့ကို၎င်းတို့အားစျေး ၀ ယ်လှည်းထဲသို့ထည့်ရန်အလုံအလောက်ရှိပါသလား။
Content Analytics တည်ထောင်သူ David Feinleib က ၇၈% ကျော်သည် e-commerce ဆိုက်များမှ Amazon နှင့် Walmart.com ကဲ့သို့သောရှာဖွေရေးဝေါဟာရများသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များထက်ယေဘုယျရှာဖွေရေးဝေါဟာရများဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ In-store search search ၏ပထမစာမျက်နှာတွင်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းပေါ်လာလျှင်သင်မည်သို့သိနိုင်သနည်း။ ထိပ်ဆုံးရာထူး ၃ ခုရှိကုန်ပစ္စည်းများသည်အခြားရလဒ်များအားလုံးထက် ၄ ဆအသွားအလာကိုပိုမိုနှစ်သက်သောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဒီပြissueနာဟာမိုဘိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းကြောင့်သိသိသာသာပိုဆိုးလာတယ်။
Shopability ဘက်တွင်အွန်လိုင်းကုန်သည်တစ် ဦး ကမှန်ကန်သောသတင်းအချက်အလက်များကို ၀ ယ်သူအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်မှန်ကန်သည့်အချိန်တွင်မှန်ကန်သောပုံစံဖြင့် ၀ ယ်သူဟုတ်မဟုတ်ကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ ရောင်းရန်ဆေးခန်းသို့ဓါတ်ပုံများ၊
နာရီအလိုက် Content Analytics သည်လက်လီရောင်းဝယ်မှုများကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည် အမေဇုံ, Best Buy, ကော့စ, CVS, Drugstore.com, ဆမ်ရဲ့ကလပ်နှင့် Walmart သင်၏ထုတ်ကုန်များမည်သည့်နေရာတွင်မည်သို့ပြနေသည်ကိုကြည့်ရန်။
item တစ်ခုဖြစ်သည် စတော့ရှယ်ယာထဲက? သင်သတိပေးချက်ရပြီ
item တစ်ခု ၎င်း၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှုံးသည် ရှာဖွေမှုရလဒ်များအတွက်? သင်သတိပေးချက်ရပြီ
သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက် သူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းပြောင်းလဲသွားသည် ပေးထားတဲ့လက်လီအရောင်းဆိုင်တခုမှာလား သင်သတိပေးချက်ရပြီ
မလုံလောက်အရေအတွက် ထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း? သင်သတိပေးချက်ရပြီ
အပေါ်ကြည့်မကောင်းပါ မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေ? သင်သတိပေးချက်ရပြီ
ရုပျပုံမြား ပြန်ဆိုမပေး မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း? သင်သတိပေးချက်ရပြီ
သင်အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးလောကတွင်ရောက်ရှိနေပါကသင်၏မက်ထရစ်အဘိဓာန်တွင် Findability နှင့် Shopability ကိုထည့်သွင်းရန်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်သည်။
ဂျင်မ်စတာရန် ဖောက်သည်များ၏ဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုခိုင်မာအောင်တိုင်းတာသည့်တန်ဖိုးကိုတိုင်းတာသောနိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံဖြစ်သည်။ Sterne သည်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာစာအုပ်ရှစ်ခုကိုရေးသားခဲ့သည်။ တည်ထောင်သူဥက္ကဌနှင့်လက်ရှိဥက္ကဌဖြစ်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ် Analytics မှအသင်း နှင့်ထုတ်လုပ်သည် eMetrics ထိပ်သီးအစည်းအဝေး နှင့် မီဒီယာ Analytics ထိပ်သီးအစည်းအဝေး.
MockupsJar - မိုဘိုင်းနှင့် Desktop အတွက် Stock Mockups
ဤအချက်ကိုလွယ်ကူစွာထားပါ - အကျပ်အတည်းဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ ၁၀ ခု